Tian'ny Ejipsiana Haongana ny Fitondrana
Nomarihin'ny vahoaka Ejipsiana ny [30 Jona] ny fahatsiarovana ny nitondran'ny filoha Mohamed Morsi voalohany ny firenena, miaraka amina famoriam-bahoaka goavana nanerana an'i Ejipta, niantsoana azy handao ny toerany. Fampielezan-kevitra manohitra an'i Morsi atao hoe Tamarrod [ar], izay midika hoe fanoherana, no manamafy fa 22 tapitrisa ireo sonian'olon-tsotra voaangona hatramin'izao, izay...
Naongan'ny Ejipsiana i Morsi sy ny Fitondran'ny Mpirahalahy Miozolomana
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana04 Jolay 2013
Tapaka hatreo ny herintaona nitondran'i Morsi, taorian'ny fihetsiketsehana lehibe nanerana an'i Ejipta niantso azy hiala nanomboka tamin'ny 30 Jona. Ny komandin'ny Tafika Ejipsiana Abdel Fattah Al Sisi no nanambara nandritra ny mivantana minitra vitsivitsy lasa izay fa ny Lehiben'ny Fitsarana Momba ny Lalampanorenana Adly Mansour no ho filoha vonjimaika vaovao...
Mitabataba Ao Amin'ny Twitter Ny Filoha Ejipsiana Teo Aloha Morsi
Tsy filohan'i Ejipta intsony ny Filoha Mohamed Morsi. Fa na izany aza dia mitabataba ao amin'ny kaontiny voamarina ao amin'ny Twitter @EgyPresidency izy.
Fiantraikan'i Brezila: Olona an'Arivony Mihetsiketsika ‘Ho Amin'i Paragoay Tsara Kokoa’
Amerika Latina03 Jolay 2013
Olona manodidina ny 3000 eo ho eo [es] no nidina an-dalamben'ny renivohitr'i Paragoay mba handrenesan'ny ao amin'ny antenimiera azy, taorian'ny fironana fihetsiketsehana ao Brezila herinandro vitsivitsy lasa izay. Notontosaina tamin'ny alalan'ny tambajotra sosialy, tamin'ny alalan'ny teny ifankafantarana #porunparaguaymejor. [“Ho amin'i Paragoay tsaratsara kokoa”] ny fanentanana ny sivily hiomana ho amin'ny...